IFaucet evuzayo? Umhlwa? Ngaba Amanzi Aya Ngokucotha? Izandla kwiNdlela yokuYilungisa-IiFaucethi zeKhitshi eziBalaseleyo ngo-2021 | IiFaucethi zeBathroom ezigqibeleleyo | WOWOW iiFaucets
Ikhaya / Blog / Ifayiphu evuzayo? Umhlwa? Ngaba amanzi acotha? Izandla malunga nendlela yokuLungisa
2020 / 10 / 21 uhleloBlog 7711 0
Umxholo we-Xiaoxin Igumbi lokuhlambela
Kuthekani NgeePompo Ezivalekileyo?
/ Ukuvula iiTephu /
Umbhobho osebenza iintsuku ezingama-365 ngonyaka, ngakumbi lowo usebenzisa amanzi ashushu qho, ngokuqinisekileyo uya kugqunywa ngelimecale. Ixesha elingaphezulu, amanzi aphuma kwimpompo aya esiba mancinci kwaye ancipha, okuchaphazela kakhulu amava okusebenzisa itompu.
Sebenzisa nje ibhola yekotoni enqunqiweyo, uyithi nkxu kwisixa esincinci seviniga emhlophe kwaye uyilungise kumbhobho malunga nemizuzu emi-5.
Emva kwemizuzu emi-5, vula itepu kwakhona kwaye ubone, ukuhamba kwamanzi kwangoko kwaba kukhulu kakhulu ~.
Uninzi lwabahlobo beentloko zeeshawari zasekhaya azivelisi amanzi kakuhle emva kokuzisebenzisa okwethutyana. Abanakunandipha nokuba nentuthuzelo yeshawa elungileyo ~.
Yiza uzame iviniga emhlophe encinci eplastikini kwaye usonge intloko yeshawari malunga nemizuzu engama-30. Intloko yeshawa iya kuba yinto entsha ~!
/ Ukuvula ukuntywila /
Sink ngengozi ivalekile? Sukuba nexhala, galela iviniga emhlophe kunye nesoda yokubhaka kwisinki kwi-1: 1, ngokulandelanayo.
Ngaphantsi komzuzu, isinki inokukhawuleza ivaleke, isitshixo asizizo izandla ezimdaka oh.
/ Lungiselela ukuFikelela emanzini /
Isinki incinci kakhulu kwaye ayilunganga kwaphela ukusebenzisa ibhakethi elikhulu ukubamba amanzi.
Yongeza nje umhlakulo omncinci okanye ibhotile enkulu yeplastiki phambi kwetephu, ungawabamba ngokulula amanzi ~ awuzukuvuza oh.
/ Kulula ukuhlamba izandla /
Ukuba itepu ikude kakhulu emva endlwini, akukho lula ukuhlamba izandla. Ungayisombulula ngokulula le ngxaki ngokuguqula iibhotile zeplastiki ezisetyenzisiweyo kancinci.
Hlamba ibhotile endala yeplastiki kwaye usike ezantsi.
Emva koko uncamathisele ngqo etephini ngoko ke akufuneki ugobe xa uhlamba izandla! Ikwathintela nokutshiza amanzi.
/ Ubungqina beSplash /
Abanye babahlobo bethu basebenzisa iipompo ezindala kumagumbi abo okuhlambela emakhaya, afakwe phezulu kwaye atshize yonke imizimba yabo ukuba abalumkanga. Kukufundisa iqhinga, ibhotile yeplastiki iyakwazi ukusombulula ingxaki.
Okokuqala, phawula isiqingatha esiphezulu sebhotile uze uyinqumle ivule ngesixhobo.
Ukukhutshelwa: Siza kuphawula ibhotile yeplastiki kuqala. Emva koko usike ngesixhobo.
Ukukhutshelwa: Qaphela: indawo omiswe kuyo umsesane womlomo unokunqunyulwa okanye hayi, kuxhomekeke kubungakanani betephu. Emva kokusika, sisebenzisa isikere ukwakha imiphetho erhabaxa (ukuthintela ukusika izandla).
Emva koko, fakela isiciko sebhotile seplastikhi esigqibeleleyo.
Ukukhutshelwa: Sifaka ibhotile yeplastiki esisikiweyo ngaphezulu kwetephu.
Ikhaka elilula lokuhambisa amanzi liya kuyenza, ukuze ukuhamba kwamanzi kube ne-arc ethile, xa uhlamba izinto azizukuchaphazela, kodwa kunye nokulawula indlela eya kuyo.
Imibhalo: Yiyo leyo. Njengoko ubona, ukuhamba kwamanzi kugobile kwaye kulula ukuhlamba izinto.
Uyilungisa njani itompu evuzayo?
Iipompo ezingalungisekiyo kwaye zihlala zinengxaki ngaphandle kweeclogs ziyavuza. Ungayilungisa njani itephu evuzayo?
Okokuqala, vula ipleyiti yokugubungela iplastikhi ngaphezulu kwetephu, emva koko usebenzise isixhobo ukukhulula izikrufu ngaphantsi.
Ukukhutshelwa: Xa uyivula, ubona isikulufu. Siye sayikhulula. Galela ipleyiti yokugubungela iplastiki ngaphezulu kwesiphatho sethumbu.
Nje ukuba ukhulule izikrufu, susa isibambo setephu.
Imibhalo ebhaliweyo: Nje ukuba ingasikiswanga, siza kuthatha isibambo sethumbu.
Okokugqibela, sebenzisa isixhobo ukuqinisa izikrufu. Ngokwesiqhelo iimpompo zivuza kuba izikhonkwane zikhululekile, ke qinisa nje izikrufu ukuthintela ukuvuza.
Ukukhutshelwa: Logama nje sisomelela ngesitshixo, kulungile ukuba sihambe.
Ungayicoca njani i-Faucet ngokufanelekileyo?
/ Ukuhla /
Sukungxamela ukuthulula iseleki eseleyo, gxuma inani elifanelekileyo le-ketchup smear kwiindawo ezinomhlwa zompompo, hlala malunga nemizuzu emi-5, emva koko wosule ngelaphu elimanzi, umhlwa uhambe kwangoko ungalandanga. .
/ Susa amabala aManzi /
Sika ilamuni kwisiqingatha kwaye uyisebenzise ukosula itepu. Ngaphantsi kwemizuzu emi-2, itompu icocekile ngoko nangoko kwaye iyakhazimla!
Ngaphambili :: Iintsapho zamaTshayina, ngenene azikufanelanga ukwahlukana okwesithathu? next: Ukulungiswa kwesipili segumbi lokuhlambela, iipesenti ezingama-99 zaBantu ziya kuyityeshela le nkcukacha